Maumbirwo uye zvidzidzo saiti yakatanga muna 2010 ine chinangwa chekuchengetedza vaverengi vayo nezvezvazvino nhau, shanduko uye mafoni yeiyo dzidzo system. Ruzhinji rwe kupikisa uye yunivhesiti uye misoro yechikoro, kubva maitirwo ebasa rehurongwa hwehunyanzvi kune zviwanikwa uye magwara evadzidzi.
Zvese izvi zvinogoneka nekutenda kune yedu yekugadzirisa timu iyo iwe yaunogona kuona pazasi. Kana iwe uchida kuve chikamu cheboka iri, unogona kutirovera runhare pano. Kune rimwe divi, mu peji ino Iwe unogona kuwana ese misoro yatakafukidza pane ino peji pamusoro pemakore, akarongedzwa nezvikamu.
Vakapedza kudzidza uye Chiremba weFilosofi kubva kuYunivhesiti yeNavarra. Nyanzvi Kosi mukudzidzisa paEscuela D´Arte Formación. Kunyora uye uzivi chikamu chebasa rangu rehunyanzvi. Uye chishuwo chekuenderera mberi nekudzidza, kuburikidza nekuferefetwa kwenyaya nyowani, chinondiperekedza mazuva ese.
Kudzidza hakuitwe, asi pachinzvimbo kunotendera iwe kuti uve kwaunoda. Nekuti kudzidziswa kwakanaka kunovhura mikova yese yaunoda. Hazvina kunonoka kuramba uchidzidza! Neichi chikonzero, kuFormaciónyEstudios isu tinoda kuti iwe ugone kuzadzisa zvinangwa zvako zvese neruzivo rwakanaka.
Ini ndagara ndichifarira kudzidziswa kwehunyanzvi uye nhungamiro (FOL) uye mune rangu basa ndakapfuura zvidzidzo zvakanangana neizvi. Pamusoro pezvo, kudzidza matekinoro ekudzidza chinhu chakabata pfungwa dzangu, kunyanya kudzidzisa vana kudzidza.
Vintage '84, dhongi risina kugadzikana rine chigaro chakashata uye nekunakidzwa kwakawanda uye mafaro. Kuve-up-to-date mumakosi ndechimwe chezvinhu zvangu zvekutanga: hautombomira kudzidza. Iwe unoda here kuziva maitiro ekuvandudza muzvidzidzo zvako? Mune zvinyorwa zvangu iwe unowana akawanda matipi ayo, ndinovimba, achakubatsira iwe kunatsiridza kudzidziswa kwako.